ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ စာရေးပြီး အသက်မွေးလို့ရတဲ့သူကို လက်ချိုးရေတွက်လို့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ စာရေးဆာအများစုဟာ ဘဝကိုရောင်းချပြီး ကိုယ်မွေးမြူထားတဲ့ ကလောင်တချောင်းအတွက် ပေးဆပ်နေရ တဲ့သူတွေပါ။ အရပ်သားဒေါက်တာနည်ဝင်းက စာရေးဆရာကြည်ဇော်ဝင်းရှင်သန်ဖို့ နောက်ကွယ်ကနေ ပေးဆပ်နေရတယ် မဟုတ်လား။
အနုပညာသမားတယောက်မှာ ဘဝအမောတွေ သိပ်များနေရင် အနုပညာပစ္စည်းကောင်းတွေကို ရေရှည် မဖန်တီးနိုင်ပါဘူး။ ဘဝက သိပ်ဆင်းရဲလွန်းနေရင် ဆင်းရဲတဲ့ ဘဝအကြောင်းကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ရေးမိပေ လိမ့်မယ်။ ကျနော်က ဘဝသရုပ်ဖော်(သရုပ်မှန်စာပေ) တွေရေးနေပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝကြီး ရေရှည်ဆင်းရဲ နေမှာကိုတော့ မကြိုက်ပါဘူး။ စား ဝတ် နေရေးအတွက် အချိန်ပြည့်လုံးပန်းနေရရင်လည်း စာကောင်းတွေ မထွက်နိုင်ပါဘူး။ ပေမီဒေါက်မီစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် စာရေး ဆရာတယောက်ရဲ့ဘဝက အထိုက်အလျောက်တော့ အဆင်ပြေနေရမယ်လေ။
ဝေဖန်ရေးဆရာတယောက်က ကျနော့်ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်တအုပ်ကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဝေဖန်ဖူးတယ်။
ဆရာဝန်တယောက်က အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိတာကို ငြီးချင်းလုပ်ပြီး ရေးစရာလားတဲ့။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ကိုယ့် ထက်နိမ့်ကျပြီး အဆင်မပြေတဲ့ဘဝတွေကိုမှ အားမနာဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေ။ လူတိုင်းက အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့ နေချင်ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ အိုးပိုင် အိမ်ပိုင်နဲ့နေချင်တာ အပြစ်လားကိုခင်လွန်းရာ။ အဲဒီဝေဖန်ရေးဆရာက ငတ်တာပြတ်တာရေးမှ သရုပ်မှန်စာပေ ထင်ပုံရတယ်။
ကျနော်မန္တလေးသားမဟုတ်တာ ကိုခင်လွန်းလည်းသိသားပဲ။ ကျနော်စာရေးဆရာအဖြစ်နဲ့မန္တလေးမှာဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ဆိုရင် ကျနော့်မိသားစုအတွက် အိုးပိုင်အိမ်ပိုင် ရှိမှဖြစ်မယ်။ ကျနော်ရဲ့နေ့စဉ်ဆေးခန်းဝင်ငွေ တစ်ပဲခြောက်ပြားနဲ့ မန္တလေးမြို့ကြီးပေါ်မှာ ဘယ်လိုလုပ် အိမ်ဝယ်နိုင်မလဲဗျာ။ သူငယ်ချင်းအုပ်စိုး(ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ထွန်း) ပြောသလို လူနာရင်ဘတ်ကို နားကြပ်နဲ့ ထောက်ပြီး အောက်တန်းကျကျ ကျနော် ဓားပြမတိုက်နိုင်ဘူး။ ဆရာဝန်ဟာ မုဆိုးမဟုတ်သလို လူနာဟာ လည်း သားကောင်မဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော်က ဆေးခန်းထက် စာပေကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ နာမည်ရစ စာရေးဆရာတို့ထုံးစံ အတိုင်း ၁၉၈၈ ကနေ ၁၉၉၁ နှစ်အကုန်အထိ စာတွေပဲလှိမ့်ရေး နေမိတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီကာလတွေမှာ ရန်ကုန် မန္တလေးက စာရေးဆရာတွေ တရုန်းရုန်းနဲ့ ကျနော့်အိမ်မှာ နေ့စဉ်ပွဲတော်ကြီးပေါ့။ ကျနော့်ဘဝရဲ့အပျော်ဆုံအချိန်တွေလို့ပြောလည်းရပါတယ်။
အိမ်ရှေ့မှာ အမြဲလိုလို စက်ဘီး လေး၊ ငါး၊ ခြောက်စီး ရှိနေတတ်တော့ ကျောင်းသားမိဘတယောက်က ဝိုင်းကျူရှင်ပေးတယ်ထင်ပြီး သူ့သား ကလေး (၆) တန်းကို ကျူရှင်အပ်ချင်လို့ဆိုပြီး လာမေးတာတောင် ကြုံဖူးပါတယ်။
ကျနော်ငှားနေတဲ့အိမ်က မန္တလေးဘူတာကြီးနဲ့ အနီးလေးဆိုတော့ ရန်ကုန်ကစာရေးဆရာတွေအတွက် တော့ တည်းအိမ်၊ စားအိမ်ပေါ့။ ကျနော်မရှိလည်း ကျနော့်အိမ် ထမင်းစားခန်းမှာသူတို့ချင်း ဝိုင်းဖွဲ့စိုပြေ နေကြတာမျိုးတွေတောင်ရှိဖူးပါရဲ့။ အဲ့ဒီကာလတွေတုန်းက ကျနော့်အိမ်ကိုမကြာခဏ အလည်လာတတ် တဲ့ သူငယ်ချင်းစုထား (ဒေါက်တာထားထား) က ကျနော့်ကိုယ်စား ဧည့်ခံပေးနေတတ်တယ်။ ကျနော်ကလည်း စာသမားတွေနဲ့နေနေရရင် ထမင်းမေ့၊ ဟင်းမေ့ရုံသာမက ကိုယ့်ဘဝကို တောင် မေ့တယ်။
မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးမန်နေဂျာက ကျေးလက်စပါးဂိုဒေါင်ကို စစ်ဆေးဖို့ ကွင်းဆင်းလာတယ်။ မြို့နယ်စိုက် ပျိုးရေးမန်နေဂျာက သူ့ကိုလာကြိုတဲ့ ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေးမန်နေဂျာကိုမေးသတဲ့။
ဒီလယ်ကွင်းတွေကိုကျော်ရင် စပါးဂိုဒေါင်တွေဆီကိုရောက်ပြီလားတဲ့။ ကျေး/ဂျာက အခုဂိုဒေါင်တွေထဲ ရောက်နေပါပြီတဲ့။ ကျနော်လည်း မြို့/ဂျာလို အခု ဂိုဒေါင်ထဲ ရောက်လုိ့ ရောက်မှန်းမသိသလို ဖြစ်နေပြီ။ ဆရာမောင်သာရ မန္တလေးရောက်လာရင် ကျနော်နဲ့တနေကုန်အတူသွား၊ အတူလာဖြစ်နေပြီ။ ကျနော့်မှာ ကျနော်အလေး စားရဆုံးး ဆရာမောင်သာရနဲ့အတူလို အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရခြင်းဟာလည်း ကျနော့်အတွက် တော့ မင်္ဂလာတပါးပေါ့ကိုခင်လွန်း။ ကျနော်စာရေးဆရာဖြစ်လာတာလည်း ဆရာ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပေါ့။ ဆရာမောင်သာရသာမရှိရင် …. ကြည်ဇော်ဝင်းဆိုတာဖြစ်လာမယ်တောင်မထင်ဘူး။ ဆရာ့စာပေ ကျေးဇူးတွေက ကျနော့်အပေါ်မှာ အများကြီးရှိတယ်။
စာပေနယ်မှာ ကျနော်ခြေကျွံလာတာနဲ့အမျှ ကျနော့်မိသားစုရဲ့နောင်ရေးအတွက် စိတ်ပူလာတယ်။ ကျနော်စာပေနယ်မှာ တသက်လုံးပျော်မွေ့မယ်ဆိုရင် ကျနော့် မိသားစုရဲ့နောင်နေရေး၊ ထိုင်ရေးအတွက် စိတ်အေးရမှဖြစ်မယ်။ ဘယ်မလဲနေစရာအိမ်လေးတလုံး။ အဲဒီအချိန်မှာ ကချင်ကြီး တင်မောင်မြင့် ကျနော့် အိမ်ကို ပေါက်ချလာတယ်။
ကချင်ကြီးလို့သာအများကခေါ်နေကြပေမယ့် တကယ်တော့ ကိုတင်မောင်မြင့်က ရှမ်း-ဗမာပါ။ သူကလည်း အဲဒီအချိန်တုန်းက (၈၈) အရေးအခင်းကြောင့် ဝန်ထမ်းဘဝက အလုပ်ဖြုတ်ခံထားရသူ။ အရပ်သားဘဝနဲ့ သူတို့ဒေသထုံးစံအတိုင်း ကျောက်သမားတပိုင်းဖြစ်နေပြီ။
ကျနော့်အိမ်ငှားနေရတာကိုကြည့်ပြီး ခင်ဗျား စာသမားယောင်ယောင်လုပ်မနေနဲ့၊ ခင်ဗျားမိသားစုနောင်ရေး အတွက် ဖားကန့်ကိုအလုပ်သွားလုပ်၊ ကျနော်လိုက်ပို့မယ်လုိ့ပြောလာတယ်။ ရေဆာတုန်း ရေတွင်းထဲကျ တယ်ဆိုပါတော့။ မိသားစုမှာတင်နေတဲ့အကြွေးတွေကလည်း လည်ပင်းမရောက်ပေမယ့် ရင်ခေါင်းဆိုက် နေပြီ။ ဆရာဝန်ဖြစ်နေပြီး ဘယ်လိုလုပ်အကြွေးတင်တာလဲလို့ ကိုခင်လွန်းသိချင်မှာပေါ့။
ဈေးချိုမှာ ကျနော့် အမျိုးသမီးဖွင့်ထားတဲ့ဆေးဆိုင်က ကျနော့်မှာအရင်းအနှီးမရှိတော့ ငွေတိုးယူရတာပေါ့ ဗျာ။ အတိုးက သိပ်များလှတယ် တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အလွတ်ကို ၁၀၀ မှ ၆ ကျပ်ကိုး။ အတိုးကိုလည်း လစဉ်မဆပ်နိုင်တော့ အရင်းပေါ်အတိုးဆင့်ပြီး များများလာတာပေါ့။ ဒီအကြွေးတွေကိုဆပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကျနော်ဖားကန့်သွားပြီး အလုပ်လုပ်မှဖြစ်တော့မယ်လေ။
ကျနော်တို့အညာသူအညာသားတွေအတွက် ဖားကန့်မှာငွေတွင်းကြီးရှိနေတယ်လို့ထင်နေကြတာဗျ။ ဖားကန့်မှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့အများစုက အဆင်ပြေပြီး ပြန်လာကြတာက များတာကိုး။ အဆင်မပြေလို့သာ ဖားကန့်သွားရမှာ တကယ်တမ်းကြတော့ ကျနော်မသွာချင်ဘူး။ ကျနော်ချစ်တဲ့မိသားစု ကိုခွဲပြီး အိုးပစ်အိမ်ပစ်နဲ့ တနယ်တကျေးကို ဘယ်မှမသွားဖူးဘူးဗျ။ မိသားစုကိုထားခဲ့ပြီး ကျနော်တယောက် ထဲသွားရမှာ။ အဲဒီတုန်းက သမီးကြီးမနွယ်နည်ဝင်းက (၅)တန်း ကျောင်းသူလေးပဲ ရှိသေး တယ်။ ကျနော် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မိသားစုကိုခွဲခွာသွားနိုင်မှာလဲ။
ကျနော်က မကွေးတိုင်းသားဖြစ်ပေမယ့် အခုအသက်အရွယ်ထိအောင် မကွေးကိုမရောက်ဖူးဘူး။ ခုလောက်ဆို အိမ်ကိုခင်လွန်းတဲ့ကျနော့်ကို ကိုခင်လွန်းခံမှန်းလို့ ရလောက်ပါပြီ။ ကျနော်ဟာ အိမ်ကခွဲရမှာ ကို သေမလောက်ကြောက်တဲ့သူ။ ဒါပေမဲ့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဗျာ။ ဘဝက တောင်းဆိုနေပြီ။
ကျနော်မရောက်ဖူးတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကို အစမ်းသွားကြည့်တဲ့အနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေကြီး ကဗျာဆရာ ဇောင်းထက် (ဦးဇင်ဝေ) ရှိတဲ့မြစ်ကြီးနားကောလိပ်ကို အရင်သွားကြည့်လိုက်တယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မိတ်ဆက်ဆိုပါတော့။
မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၉၁ ခုအောက်တိုဘာလထဲမှာ မောင်ဇောင်းက ကျနော့်ကိုတွေ့လို့ပျော်နေပေမယ့် ကျနော့် ရင်ထဲမှာတော့ ဝါကျအပြည့်နဲ့။ အဲဒီအောက်တိုဘာလထဲမှာ တစ်လထဲ …. ကျနော့်ဝတ္ထုတို သုံးပုဒ်ပါတာကိုလည်း မှတ်မိတ်နေသေးတယ်။ ကျနော်ချစ်တဲ့စာပေလောကကိုခွဲရမှာ ဘယ်လောက်ခက် မယ်မှန်း ကိုခင်လွန်း မှန်းဆ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်ဖားကန့်ကိုမသွားမဖြစ်သွားရတော့မယ်ဆိုတော့ ဆရာမောင်သာရက မှာရှာတယ်။ ကိုနည်ဝင်း ဖားကန့်မှာ သုံးနှစ်ပဲအလုပ်လုပ်ပြီး ပြန်လာပါ။ သုံးနှစ်ထက်ပိုမနေပါနဲ့။ ဟိုမှာ ဖတ်ဖို့ အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေ ထည့်ယူသွားပါတဲ့။
ညနေတိုင်းလိုလိုဆုံနေကြ မန္တလေးစာပေအသိုင်းအဝိုင်းကလည်း စိတ်မကောင်းကြဘူးပေါ့။ ဖားကန့်မှာ ဆေးခန်းဖွင့်ရင် ဆေးခန်းငှားခပေးဖို့နဲ့ ဆေးတွေဝယ်သွားဖို့ ကျနော်စီးနေကျ ကျနော်ရဲ့စီးတော်မြင်း ရွှေအိုရောင် ဆိုင်ကယ်လေးကိုရောင်းပြီး အရင်းအနှီးလုပ်လိုက်တယ်။ ကျနော်ဖားကန့်သွားမယ့်အချိန်က ဆောင်းတွင်းကြီး ဆိုတော့ ဖားကန့်မှာအေးရင်ဝတ်ဖို့ အနွေးထည် တွေကို (၁၉)လမ်း ညောင်ပင်ဈေးက လေဘေးထည် ပေါချောင်ကောင်းတွေ ဝယ်သွားလိုက်တယ်။
အမှတ်မမှားရင် ၁၉၉၂ ခု နိုဝင်ဘာ (၁၃) ရက် ညနေ (၆)နာရီ မြစ်ကြီးနားရထားနဲ့ ကိုတင်မောင်မြင့်ရှိရာ ဟိုပင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ ကာတွန်းအော်ပီကျယ်၊ ကိုဆန်းကျော် မောင်(ဆူးငှက်)၊ ညိုညိုတင်လှတို့ ဘူတာ ကိုလိုက်ပို့ကြတယ်။။ ဇနီးနဲ့သမီးက မျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ လိုက်ပို့ကြတာကိုတော့ ထည့်ပြောဖို့ မလိုဘူး ထင်ပါရဲ့။
ညိုညိုတင်လှက ကိုကြည်ဇော်ဝင်း ဟိုမှာဖတ်ဖိုိ့ဆိုပြီး ဆရာဒဂုန် တာရာရဲ့စာအုပ်တအုပ်ကို လက်ဆောင် ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
ရထားပြတင်းပေါက်ကနေတန်းလန်းကျနေတဲ့ကျနော့်လက်ကို သမီးလေး မနွယ်နည်က ခုန်ခုန်ပြီး သူ့လက် ကလေးနဲ့လှမ်းလှမ်း ဆွဲရှာတယ်။ လိုက်ပို့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်း မျက်နှာမကောင်းကြဘူပေါ့။ သူငယ်ချင်းအုပ်စိုးရဲ့ကဗျာစာအုပ်ကြော်ငြာစာသားလေးကိုလည်း ကြားယောာင်မိနေရဲ့။
(Articles) Kyi Zaw Win